समृद्ध नेपाल बनाउने यस्ता छन् हाम्रा रोगि नेताहरु? हेरौं कुन नेतालाई कुन रोगले सताएको छ ? « Today Khabar
समृद्ध नेपाल बनाउने यस्ता छन् हाम्रा रोगि नेताहरु? हेरौं कुन नेतालाई कुन रोगले सताएको छ ?
प्रकाशित २७ असार २०७५, बुधबार १७:४६
काठमाडौँ । स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने उखान यत्तिकै चलेको होइन। मान्छे स्वस्थ हुनका लागि उसको तन र मन दुवै स्वस्थ हुनुपर्छ। स्वस्थ मान्छेको व्यवहार र क्रियाकलाप सहज र सामान्य हुन्छन्। स्वस्थ मान्छेको निर्णय क्षमता पनि राम्रो हुन्छ।
देश सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेका नेताहरू शारीरिक र मानसिक दृष्टिले स्वस्थ हुनुपर्ने हो। उनीहरू बिरामी र अशक्त भइदिँदा उनीहरूबाट जनताले माग गर्ने सक्रियतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ। फलतः राजनीतिक परिदृश्य पनि चुस्त हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री , केपी ओली
दुवै मिर्गौलाले काम नगरेपछि केपी ओलीले मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेका छन्। स्यालुलाइटिस भनिने छालाको संक्रमण र पछिल्लो समय सेवन गरिरहेका विभिन्न औषधिका कारण सुगरको मात्रा बढेर उनको हात समेत सुन्निएको छ। दस वर्षअघि भारतको अपोलो अस्पतालमा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो।
त्यसयता उनले नियमित रूपमा अपोलो गएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका थिए। पछिल्लोचोटि हात सुन्निँदा पनि विस्तृत परीक्षण नगराई युरिक एसिडकै औषधिको भर पर्दा समस्या बल्झेको थियो। केही समयअघि अस्पताल भर्ना हुँदा उनको रगतमा चिनीको मात्रा पाँच सय नाघेको थियो। हेमोग्लोबिन एकदमै कम भइसकेको थियो।
मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि सेवन गरिरहेका विभिन्न औषधि (शरीरलाई शक्ति दिने स्टोरोयडसहित)का साथै उनी सुगर, पायल्स र उच्च रक्तचापको औषधिसमेत नियमित खाइरहेका छन्। मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि खाने औषधिले रक्तचाप, सुगर र युरिक एसिडसमेत बढाउन सक्ने र संक्रमणको जोखिम पनि बढी हुने भएकाले धेरै मानिससँग सम्पर्कमा नरहन उनलाई चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्।
स्वास्थ्य समस्याकै कारण खानामा मुख बार्ने गरेका ओली अहिले पनि खाना खानुअघि थाल, कचौरा र चम्चालाई उमालेको पानीले पखालेपछि मात्र ती भाँडामा खाना खान्छन्। थाल र भाडाकुडामा किटाणुहरूको संक्रमण हुने भएकाले तातोपानीले भाडा निर्मलीकरण गर्नुपरेको हो।
झलनाथ खनाल,वरिष्ठ नेता, नेकपा एमाले
झलनाथ खनाल राति आँखा देख्दैनन्। रतन्धोको समस्या भएका उनी अँध्यारो भएपछि सहयोगीबिना हिँडडुल पनि गर्न सक्दैनन्। विद्यार्थी राजनीति गर्दा नै खनाललाई टीबी भएको थियो। उपचारपछि टीबी त निको भयो तर त्यसको ‘साइडइफेक्ट’का रूपमा उनलाई आँखा नदेख्ने रोगले गाँजेको उनका निकटहरू बताउँछन्।
खनाललाई मुटुको पनि समस्या छ। उच्च रक्तचापका कारण कहिलेकाहीँ मुटुमा समस्या देखिन थालेपछि उनी नियमित चेकजाँच गराउँछन्। उनलाई मिर्गौला र प्रोस्टेटको समस्या पनि देखिन थालेको बताइन्छ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माओवादी केन्द्र
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेहको समस्या छ। चिकित्सकहरूकोे सल्लाहअनुसार उनी नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन्। हरेक दिन बिहान व्यायामलाई निरन्तरता दिने गरेका कारण अहिले रक्तचाप र सुगर दुवै नियन्त्रणमा रहेका उनी निकटहरू बताउँछन्। प्रचण्ड डा. दामोदार गजुरेलसित नियमित स्वास्थ जाँच गराउँछन्।
पेट र उच्च रक्तचापको समस्याबाट शेरबहादुर देउवा लामो समयदेखि पीडित छन्। सिंगापुरमा पेटको नियमित परीक्षण गराउन जाने गरेका छन्। पेटमा समस्या देएिपछि चुरोट पिउन छोडेका छन्। पछिल्लो समयमा खानपानमा उनले विशेष ध्यान दिने गरेका छन्।
डा. बाबुराम भट्टराई, नेता, नयाँ शक्ति नेपाल
डा. भट्टराईलाई लामो समयदेखि रक्तचापको समस्या छ। रक्तचाप नियन्त्रण गर्न भट्टराईले नियमित औषधि सेवन गर्दै आएका छन्। उनी खानपिनमा विशेष ध्यान दिन्छन्। चिल्लो/पिरो कम खान्छन्।
उनी अहिले गंगालाल हृदय केन्द्रमा छन्। चार वर्षअघि मुटुको शल्यक्रिया गराएका सिटौलालाई उच्च रक्तचाप, सुगरका साथै खुट्टा झमझमाउने समस्या पनि छ। मुटुका नसा साँघुरिएकाले रक्तप्रवाहमा अवरोध उत्पन्न भएपछि मुटुरोग विशेषज्ञ डा. यादवदेव भट्ट उनको उपचार गरिरहेका छन्। चार वर्षअघि पनि उनलाई यस्तै समस्या भएको थियो।
राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष मण्डल,राजपा नेपाल
उनी नियमित रूपमा उच्च रक्तचाप र मधुमेहको औषधि खाइरहेका छन्। महतो मर्निङवाक र योग गर्छन्। खानपिनमा सावधानी अपनाइरहेका उनी महिनामा एकपटक डाक्टरकोमा जान्छन्।
उपेन्द्र यादव सात वर्षयता मधुमेहबाट पीडित छन्। उनी दैनिक मधुमेहको औषधि लिन्छन्। व्यायाम र आरामका लागि समय मिलाउन गाह्रो हुने भएकाले उनी खानपिनमा भने विशेष ध्यान दिन्छन्।
महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष मण्डल,राजपा नेपाल
महन्थ ठाकुरको पाँच वर्षअघि भारतको दिल्लीमा मुटुमा पेसमेकर राखिएको छ। लामो समयदेखि मुटु रोगबाट पीडित ठाकुर पेसमेकर राखेपछि पनि नियमित रूपमा औषधि खान्छन्। उच्च रक्तचाप र मधुमेहको औषधि पनि खान्छन् उनी।
महेन्द्र यादव, अध्यक्ष मण्डल,राजपा नेपाल
दस वर्षदेखि मधुमेहको नियमित औषधि खान्छन्, महेन्द्र यादव। बिहान योग र व्यायाम गर्ने यादव घरबाट निस्कनुअघि केही खाएरमात्र बाहिरिन्छन्।
शरतसिंह भण्डारी, अध्यक्ष मण्डल,राजपा नेपाल
उनलाई मधुमेहको समस्या छ। उच्च रक्तचापको औषधि पनि नियमित खाइरहेका छन्। हरेक दिन कम्तीमा एक घण्टा व्यायाम गर्ने भण्डारी हप्तामा दुई–तीन दिन मर्निङवाकमा निस्कने गर्छन्।